काव्यालय, Author at Kavyalaya - काव्यालय - Page2of 16
by काव्यालय २८ चैत्र २०७७
अगस्ट महिनाको १० तारिख, सन् २०१९’ मा म ६ घण्टे ड्राईभ बिर्सिएर निरौला निवासमा पुगेको छु । त्यहाँको पाहुना सत्कारपछि आँगनमा उभिएर आँखा अघि मानव निर्मित बादलको एउटा दृश्य हेरिरहेको छु । मिस्टिक इकोज! मनमा काफी कौतुहलता छ । मष्तिस्क तरङ्गित भइरहेको छ- मिस्टिक इकोज, यही नाम । कति अनौठो छ मिस्टिक र इकोजको शब्द संयोजन । यो सोच्दै गर्दा बादलको दृश्य मलाई कति पनि अनौठो लाग्दैन ।
साँझको समय, निरौला निवासको आँगनमा उभिएको छु । तर सोचाइमा – बफेल्लो स्टेट कलेज पुगेर अनौठो आकारको बादलजस्तै मिस्टिक इकोज नामक कार्यक्रम यी जोडी आँखाले हेर्न तत्पर छन् । त्यहाँको सजावट कस्तो होला ? कस्तो होला प्रस्तुति ? के- के देखाइएला मञ्चबाट ? म अनवरत सोचिरहेछु !
मेरो अघिका वक्ता चुरोट पिइरहेका छन् । दायाँ हातका उनका दुईटा औंला बिचबाट फिल्टर मुखमा पसी नाक र मुखको प्वालबाट धुवाँ बाहिर आइरहेको छ । त्यो चुरोटको धुवाँ हावाले उडाएर मतिर ल्याइरहेको छ । म त्यसलाई बेवास्ता गर्ने कोसिस गरिरहेकोछु ।
‘कार्यक्रम शुरु हुन कति समय छ बाबु?’
अकस्मात प्रश्न सोधिएको थियो । ठिक स्थान र ठिक समयमा सोधिएकाले म खुशी हुन्छु । चुरोटको धुवाँ बेवास्ता गर्दै झटपट्टे उत्तर दिन्छु।
फेरि आँखा अघिकै दृश्यमा फन्को मारिरहेको छु । सोच्न लाग्छु, संसारमा एक घण्टामा मान्छेले कति चुरोट सल्काउँददा हुन् ? कति चुरोटले मानव निर्मित बादल लाग्दो हो । तर खुशीको कुरा, त्यहाँ एउटा चुरोटमै आगो निभ्छ । त्यो चुरोट भुइँमा झरी, खुट्टाले कुल्चिएको ठुटो हेरी म झट्ट विगतमा पुग्छु । कुनै समय म यी वक्ता जस्तै ज्यादै चुरोट पिउँथेँ । चुरोटको धुवाँ फोक्सोमा पुग्दा मात्र दिन या रातको शुरुवात भएको जस्तो लाग्थ्यो । सायद उनलाई पनि त्यस्तै रमाइलो अनुभूति हुँदो हो ।
प्रिय पाठक, म इमान्दारीपूर्वक लेख्दैछु । यो लेख्न मलाई लाज लागेको छैन । टाइप गरुञ्जेल डर पनि छैन । एउटा लेखकलाई आफ्नो विचार र अनुभूति इमान्दारीपूर्वक बोल्न किन डर या लाज लागोस् । किन डर या लाजले छेकोस् । पक्कै छेक्दैन, छेक्नु हुँदैन । यहाँ मलाई समर्थन गर्नुहुन्छ नि होइन ?
निरौला निवासमा दिउँसोका खाना खाई कार्यक्रम स्थानतिर हिँडेका छौँ । साँझ परेकै छैन, समर सिजनको अस्ताउँदो घाम अझै केही घडी बाँकी छ । बफेल्लो स्टेट कलेज, मन अघिदेखि पुगेको ठाउँ हामी भौतिक रूपमै उपस्थित हुन कार्यक्रम स्थल पुग्छौँ । हामी ? ती दुईमा म एक भएँ र अघिका वक्ता, भक्त घिमिरे हुन् । यी वक्तालाई म सर भनेर सम्बोधन गर्छु । उनी मलाई भतिज भन्छन् । उनको यो सम्बोधनमा छोराको भावनात्मकता झल्कन्छ । त्यसैले, मैले खुशीसाथ स्वीकारेको छु ।
कलेजअघि गाडी पार्क गरी बाहिर निस्कन्छौँ । हाम्रा अघि तीन वक्ता गफ चुटिरहेका छन् । कविहरू नविन प्राचिन, रूपेश ढुंगाना बेन्चमा बसेका छन्। त्यसकै छेउतिर एक १२ वर्षिय जतिका बालक छन् ।
हामी नजिक पुग्दा रूपेस र नवीन हामीलाई फर्किएर हेर्छन् । तब मात्र देखिन्छन् घाम तापेर बेन्चमा लडेका दाह्रीवाल उमेश आचार्य, जो छेलिएका रहेछन् । यसरी हेर्दा उनीहरू तीन होइन चारजना रहेछन् । छोटो औपचारिकता पछि हामी आलोपालो केही सामूहिक तस्वीर लिन्छौँ । कवि आचार्यसँग मेरो खास दोस्ती छैन । म रूपेस र नवीनजीसंग यसै क्याजुल कुरामा भुल्लिन्छु । ती प्राचीन भर्खरै फेसबुके माध्ययमबाट चिनिएका कवि हुन्, यसबाहेक प्रतक्ष्य भेट थिएन ।
दश मिनेट जतिको गन्थन, फोटो खिचाइपछि भक्त सर र म भित्र जान्छौँ । कार्यक्रमका मुख्य आयोजक लमिनजी र उनको टिमले दोश्रो तलाको मूल ढोकामै सत्कार गर्छन् । प्रिय पाठक, यहाँले याद गर्नुभयो होला लमिन नामका पछिल्तिर जी सम्बोधन राखेँ । जी सम्बोधन राख्ने मेरो एउटा आत्मिय बानी हो, जसरी भक्त सरले मलाई आत्मीयताले ‘भतिज’ भन्नु हुन्छ, त्यस्तै !
मुख्य ढोकाको एउटा टेबलमा केही पुस्तक र सिडी राखीएका छन् । टेबलमा मेरो आँखा कविता कृतिहरू; बुढो रूख र सान्नानीको इन्द्रेणी, उभिएर एक्लै र रुवाई संग्रह; त्रिवेणी संयुक्त रूपमा धर्मेन्द्र, डिपी र मैले लेखेको देखा पर्छन् । म्युजिक एल्बमहरू ; मेरो सारंगी, रचना, एउटा कहानी, दि ब्लु एन्जल, अध्यात्म, अनायास, जुनिभरिलाई साथै भजन एल्बम आराधना र प्रभु नाम पनि टेबुलमाथि श्रोताको पर्खाइमा देखिन्थे ।
अघिदेखि मेरो मष्तिस्कले बफेल्लो सिटीको ‘मिस्टिक इकोज‘; यही फरक धारको ‘कार्यक्रमको नाम’ले नै फन्को मारिरहेको थियो । सोचिरहेको थिएँ त्यहाँ हेर्नु छ – आँखाभरि गायन, सुन्नु छ कानभरि कविता र रंग्याउनु छ मष्तिस्क आर्टले । त्यसैले, हतार हतार गरी केही साथीहरूसँग हात मिलाउँदै लमिनजीलाई पछ्याउँदै, कतै हात जोड्दै, दोश्रो तलाको ढोकाबाट भित्र स्टेज हेर्न प्रवेश गर्छौँ ।
कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न मित्रद्वय पर्शु र हातमा क्यामरा लिएर काँसी वरपर हिँडिरहेका छन् । तिनीहरूसंग पनि हात मिलाउँछौँ । कार्यक्रम शुरु हुन अझै दश मिनेट जति बाँकी छ । ‘कार्यक्रम भव्य र सभ्य हुने छ’ अनुमान गर्छु । एउटा उत्सुक दर्शकले अनुमान त छ गर्नसक्ने, अरू के हुन्थ्यो ! भक्त सर, उक्त कार्यक्रमममा लमिनजीको निमन्त्रणामा पुगेका हुन् । तर म ? उनको ड्राइभर भएर त्यहाँ पुगेको थिएँ । प्रिय पाठक, यही हो वास्तविकता जसलाई म जस्ताको त्यस्तै राख्दैछु ।
खासमा चार महिनाकी छोरी च्यापेर श्रीमतीलाई माइत पठाएपछि घरमा म एक्लो सदस्य थिएँ । यो एक्लोपनमा भक्त सरले मिस्टिक इकोज कार्क्रममा जाने प्रस्ताव राख्नु भयो । मैले सोझै हुन्छ म तयार छु भनी सहर्ष स्वीकार गरेँ । त्यसरी म विना निमन्त्रणा त्यहाँ पुग्नु, मेरो लागि साहित्यिक माहोलले तान्नुबाहेक अरू केही होइन ।
दश मिनेट बित्न कति पनि समय लाग्दैन, कार्यक्रम शुरु हुन्छ । मैले चिनेका कलाकारहरू जगदिश समाल र श्याम नेपालीलाई देखेँ । कविहरू लिला निशा, उमेश आचार्य, रूपेस ढुङ्गाना र नविन प्राचीनजी थिए । यी बाहेक पनि अन्य कलाकारको उपस्थिति थियो । मैले फेरि पनि समकालीनलाई जी सम्बोधन गरेँ। किनकी जी अहिले मेरो प्रिय शब्द हो । खासमा यो लोककै प्रिय शब्द पनि हो । त्यसैले, नामका पछिल्तिर झुण्डिन्छ ‘जी’ ।
मेरा अन्य दोस्त टेक, शशी, दिललाई पनि त्यहीँ भेटेँ । मेरा आत्मीय मित्र टेक क्यानेडाबाट आएका थिए । उनीसँग नौ वर्षपछि भेट भएको थियो, हामी खुशी हुँदै गला लाग्यौँ । दोस्तमा समकालीन या प्रौढ भए पनि सम्बोधनमा फरक दृष्टिकोण छ । म उनीहरूलाई सर भनी बोलाउँदिनँ । त्यसको सट्टा नामका पछिल्तिर ‘जी’ झुण्ड्याउँछु ।
दायाँतिर दिलको छेउमा नयाँ अनुहार देखेर उनीसँग पनि हात मिलाएँ । उनको नाम हस्त तामाङ, परिचय भयो । पुराना साथीहरूसँग भेट भएकोमा खुशी त थिएँ नै । हस्तजीसँग नयाँ मित्रता बन्न पाएकोमा अझ दंग भएँ । आफू बसेको स्टेट बाहिर न्युयोर्क आई थप साथी जोड्न पाउँदा मलाई एउटा फरक खुशीयाली मिलेको थियो ।
बफेल्लो स्टेट कलेजको एउटा प्राविधिक कोठाबाट स्टेजतिर लाइटको फोकस जान्छ । तब स्टेजको सिलींङका लाइटहरू धमिलो हुँदै जान्छन् । नेपथ्यमा बाँसुरी, भायोलीन, सारङ्गी र गीतारको धुनबाट कार्यक्रम शुरु हुन्छ । त्यो बजेको धूनमा कविले आफ्ना पहिलो चरणका तीन कविता सुनाउँछन् । कविहरू स्टेजमा विना सम्बोधन, विना औपचारिकता कविता वाचन गरी फुत्त निस्कन्थे । यो कविता वाचनकै क्रममा ईफका भूटानका चित्रकार देव राई र अन्य कलाकारहरूले स्टेजको ठिक अघि दायाँतिर लाइभ आर्ट गरिरहेका हुन्थे । यसरी हेर्दा एकसाथ तीन दृश्य प्रस्तुत थिए ।
संगीतकारहरू गीतारमा विजय थुलुङ, दिल राई, पियानोमा डेबिढ ढकाल, तबलामा ईन्द्र लामिछाने र सारङ्गीमा श्याम नेपाली र बाँसुरीमा सुशिल विश्वकर्माको उपस्थिति थियो । सुमधुर संगीतको साथमा बीचबीचमा कविता वाचन हुँदा एउटा लाइभ कार्यक्रम यस्तो रोचकिलो पनि हुनसक्छ । ओहो ! मैले त्यसै दिन मात्र नजिकबाट अनुभूत गरेँ । कार्यक्रम यसरी चलिरहेको थियो, मलाई केही छुटाउन मन थिएन; त्यसैले, आँखा झिमक्याउनु नपरोस् भन्ने लागिरहेको थियो।
दोश्रा कविले त्यसै गर्थे । त्यसपछि जगदिश समालको गायकी सम्झँदा अझै ‘आहा’ लाग्छ । मिस्टिक इकोज कार्यक्रम आफैंमा एउटा पोट्रेट हो । एबस्ट्र्याक्ट हो । त्यो कार्यक्रम मात्र थिएन, त्यो एउटा आर्ट थियो । कला साहित्य र संगीतलाई एक ठाउँमा जोड्ने प्रशंसनीय काम थियो । मेरा लागि एउटा काव्यिक कार्यक्रम हेर्ने रहर यहाँ आएर पूरा भएको छ । म त्यहाँ पुग्न पाएकोमा, त्यो पल आँखैले देख्न पाएकोमा अझै दङ्ग बन्छु । जुन कार्यक्रम मैले अक्षरमा उतार्ने प्रयास गरिरहेको छु ।
बीचमा आधा घण्टाका लागि कार्यक्रम रोकेर खाना वितरण गरिएको थियो । म लाइन लागेँ । अरू साथीहरू, कार्यक्रममा उपस्थित अभिभावक र बालकहरू पनि लाइनमा लागे । ‘अरे सुमी तिमी !’ सुमी मेरो श्रीमतीकी साथी, पारीवारिक साइनोमा म उनलाई बहिनी भन्छु । उनीसँग लाइन विस्तारै अघि सर्ने क्रममा छोटो गफमा हालखबर बुझियो।
सबै दर्शकले आफ्नो टेबलअघि कार्यक्रम स्थलमै खाना खायौँ । पछि शशीले जिस्काउँदै, ‘म तँलाई तँ भन्छु जे एन, माइण्ड नगर् है’ भन्दै मुस्कायो । म धेरैपछि साथीहरू भेटेकोमा दङ्ग थिएँ । शशीको कुरा सुनी मुस्काएँ मात्र । उसले हातमा मिठ्ठा पान राखिदियो । खाना सकेपछि यसरी पान आउँछ भन्ने कल्पनै थिएन । पान चपाउँदै कार्यक्रम हेर्न खुब मज्जा भयो । साहित्यलाई नेपथ्यबाट दिएको संगीतको धुन र आँखामा नवीन र आकर्षक दृश्य देखिन्थ्यो । उक्त कार्यक्रम प्रत्यक्ष्य हेर्ने दर्शकलाई लाइभ पेन्टिङ, कविता वाचन र संगीत प्रिय लागिरहेको अनुमान गर्न सकिन्थ्यो ।
चार कविका धारावाहिक कविता वाचन जसमा सभापतिको चयन भएन । विशेष अतिथिको आवश्यकता परेन । उपस्थित कवि, संगीतकर्मी र चित्रकार मित्रहरू कसैले लामो भाषण गरेनन् । कसैले हाई काढ्ने गरी समय लिई लामो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेनन् । त्यसलै त कार्यक्रमको नाम नै ‘मिस्टिक इकोज’ !
एकपछि अर्को गर्दै आँखामा मिस्टिक इकोजका सांगीतिक कार्यक्रम अघि बढ्थे । प्रत्येक सृजना निक्कै आकर्षक, भावुक र प्रोट्रेट थिए । कवि, गायक, संगीतकार र चित्रकार समग्रहमा ‘कलाकारहरू’ एकै ठाउँमा यसरी उभ्याउनु कार्यक्रमकै सबैभन्दा सुन्दर पक्ष थियो ।
साँझ त्यसरी बित्यो। भोलिपल्ट लमिनजीसँग बिदा लिएर हिँड्यौँ । म दाहाल पुत्र ड्राइभ गरिरहेको छु । घिमिरे सरलाई त्यो कार्यक्रम अत्यन्त मन परेको कुरा बताउनु भयो । ‘साहित्य, संगीत र चित्रकारीताको त्रिकोणात्मक कार्यक्रम भूटानी समाजले पस्किएको थिएन, यो फरक स्वादको रहेको’ भनी मान्नुभयो । द्वय बफेल्लोबाट हेरिस्बर्ग फर्कंदा बाटोभरि कार्यक्रमकै कुरामा गफिंदै घर पुग्न लागेका छौँ । गाडीको अगाडि वीण्डसील सिसाबाट आकाशमा बादलको दृश्य कालो बन्दै गरेको देखिन्छ । यो कालो बादलचाहिँ मानव निर्मित हो या होइन छुट्याउन नसक्दा अनौठो लाग्दछ । आजसम्म बडो अनौठो लागिरहेकै छ !
२८ चैत्र २०७७0comment
by काव्यालय १९ फाल्गुन २०७७
जनकपुर – आजदेखि २२ गतेसम्म ४ दिन मिथिला नगरी जनकपुरमा ‘जनकपुर साहित्य महोत्सव’को दोश्रो संस्करण शुरु भएको छ । आयोजक संस्था नव मिथिला फाउन्डेसन, सह-आयोजक बुकहिल पब्लिकेसन र सानो पाइलाले…
by काव्यालय १८ फाल्गुन २०७७
पोखरा – संगीत प्रशिक्षण केन्द्र पोखराद्वारा संचालित लालबहादुर चण्डेश्वरी ढेवाजू स्मृति संगीत पुरस्कार २०७६ बाट नेपाली नृत्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनु भए वापत प्रसिद्ध नृत्यकलाकार तथा अभिनेत्री मिथिला शर्मालाई प्रदान…
by काव्यालय १५ फाल्गुन २०७७
काठमाडौँ । धेरैले सुरेश बादल भनेर चिन्ने लेखक सुरेश बडालको ‘रहर’ को रहर आज उनका पाठक-प्रशंसकहरूले पुर्याएका छन् । लेखक बडालको ‘रहर’ पहिलो कृति हो । आज शनिबार राजधानीको कमलादीस्थित…
by काव्यालय १० फाल्गुन २०७७
काठमाडौँ – चौथो नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव (निफ) को लागि ३१ देशका ६३ वटा चलचित्र छनोट भएका छन् । नेपाल चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानद्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजना हुँदै आइरहेको महोत्सवका…
by काव्यालय ८ फाल्गुन २०७७
बागलुङ – रत्न–श्रेष्ठ पुरस्कार गुठी बागलुङले विभिन्न विधामा पाँच लेखकलाई पुरस्कृत गरेको छ । शुक्रबार गुठीले हरेक दुई/दुई वर्षमा प्रदान गर्ने ५० हजार राशिको ‘रत्न–श्रेष्ठ राष्ट्रिय पुरस्कार’बाट यो वर्ष लेखक…
by काव्यालय ३ फाल्गुन २०७७
काठमाडौँ – फुड माइक्रोबायोलोजीमा एम.एस.सी गरेका नुवाकोटका लेखक सुरेश बडाल अक्षरहरूका स्वादिला पकवान तयार पार्न पनि उत्तिकै माहिर छन् । युवा पाठकहरूमाझ कथा लेखेरै छवि बनाउन सफल उनले भर्खरै आफ्नो पहिलो…
by काव्यालय २७ माघ २०७७
काठमाण्डौँ – नेपाली पत्रकारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (इञ्जा)द्वारा स्थापित एक लाख रुपैयाँ राशिको उत्कृष्ट साहित्यिक कृति पुरस्कार (२०२०) साहित्यकार तथा पत्रकार राजेन्द्र पराजुलीको संस्मरणात्मक कृति ‘कोटेश्वरको केटो’ लाई प्रदान गरिने भएको…